Powder Froorescent, Photoluminescent Powder - Grand Luminous
Alaabada la soo bandhigayAlaabada la soo bandhigay
Calaamadda daadinta xayndaabka dusha sare ee xargaha / lu ...
Koofiyadaha Luminescent Lambiyada iftiinka leh ee iftiinka leh ...
Laydhka xargaha glaze ee nidaamka baxsiga degdegga ah
Mosaics galaas oo iftiin leh
Degdeg Deg Deg ah Photoluminescent Pigment
Pleeoluminescent Glaze Tile
Ku dhalaalaya madow Yarn (Fiber) / Ku iftiimin Dar ...
Bixinta xalka mashruuca luminka
Bixinta xalka mashruuca luminka Ku saleysan sanadaha soo uruurinta tikniyoolajiyada soosaarka iyo adeegsiga ashyaaada luminta dheer kadib, waxaan ku siin karnaa xalka farsamada dhameystiran macaamiisha warshadaha kaladuwan iyo beeraha Xaqiijinta Tayada tayada leh ee alaabada la dhammeeyay waa 100% qanacsanaanta macaamiisha: 96% Heerka waqtiga ee jawaab celinta macaamiisha waa 100% Badbaadada Deegaan Iyadoo lagu saleynayo nidaamka tignoolajiyada sare iyo shirkadda wax soo saarkeeda, iftiinkeena, ...
Waxaan nahay ikhtiyaarkaaga ugu fiican ee lagu iibsado alaabada laydhka ah ee Shiinaha
Waxaan nahay ikhtiyaarkaaga ugu fiican ee lagu iibsado alaabada iftiinka leh ee Shiinaha 1. Waxaan diirada saareynaa qalabka nalalka leh. Waxaan leenahay in kabadan 15 sano oo waayo aragnimo xirfadeed ah oo ku saabsan agabka iftiinka. Waxaan ku leenahay xirfado aaladaha iftiinka leh. Awoodayagu sidoo kale waa agabyo iftiin leh. 2, Inaan iibinno qalabka alaabada leh, waxaan nahay kuwa xirfad badan. Waxaan xirfadleyaal nahay maxaa yeelay dadaal ayaan ku galnay. Waxaan fiiro gaar ah u siineynaa iftiinka waxsoosaarka ， xasilloonida sheyga. Iyada oo ku saleysan hubinta laambada ifaya ...
Waa maxay midab soojiidashada folofooshanka dheer kadib?
Midabka Photoluminescent: Waxa kale oo loo yaqaan: iftiinka ku jira budada mugdiga ah, midabka iftiinka lumiya, midabka iftiinka leh ee iftiinka-dheer ee iftiinka-luminescent-ka waa budada iftiinka leh ee loo yaqaan 'strontium aluminium' ee iftiinka iftiinka leh wuxuu iftiin karaa iftiinka iyadoo la nuugo nalalka kala duwan ee la arki karo oo si isdaba joog ah ayaa loo isticmaali karaa. Alaabtu kuma jiraan wax walxaha shucaaca leh waxaana si siman loogu fidin karaa waxyaabaha lagu daro walxaha cad sida daahan, khad, rinjiga, balaastigga, badarka, galaaska, fiber-ka si loo dardar geliyo howlaha soosaara o ...